कसरी जोगाउने जाडोमा छालाको सौन्दर्य ? यस्ता छन् उपाय - ज्ञानविज्ञान
कसरी जोगाउने जाडोमा छालाको सौन्दर्य ? यस्ता छन् उपाय
छालामा असर पर्ने धेरै कारण छन् । आफ्नो अनुहार मुलायम, दागरहित, चाउरीरहित र चम्किलो होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । तर, बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रत्येक दिनको जीवन, खानपान, व्यस्तता, थकान, अनिद्रा, वातावरणीय प्रदूषण, सूर्यको किरण आदिले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ ।
फलस्वरूप अनुहारमा विभिन्न समस्या देखा पर्न थाल्छ । छाला मुलायम, चम्किलो र दागरहित बनाउन हाम्रो जीवनशैलीको मुख्य भूमिका हुन्छ । खानपानमा थोरै सुधार गर्न सकेको खण्डमा स्वास्थ्यसँगै छालामा देखा पर्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । हामीले दिनमा ८ देखि १० गिलास पानी पिउँदा स्वस्थ रहन सकिन्छ ।
ग्रिन टी, विषादीरहित फलफूल, हरियो सागसब्जीको सेवनले छाला चम्किलो राख्छ । रातमा ६ देखि ८ घन्टा निदाएर सुतेमा हाम्रो स्वास्थ्यसँगै छाला बिग्रनबाट जोगिन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । हाम्रो शरीरको बाहिरी अंग भएको कारणले छालामा प्रदूषण र सूर्यको विकिरणले पनि असर गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सुरक्षाका लागि विभिन्न सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफ्नो छालाको प्रकारअनुसार सही तरिकाले सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सौन्दर्य सामग्री गुणस्तरीय नभएको र छालाअनुसारको प्रयोग गरिएन भने यसको परिणाम विपरीत हुन जान्छ ।
छालासम्बन्धी सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री
छालालाई सफा गर्छ ।
छालालाई ताजा बनाइराख्छ ।
मोइस्चराइजिङ क्रिम :
छालालाई मुलायम बनाउन सहयोग गर्छ ।
छालालाई सूर्यको विकिरणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ ।
नाइट क्रिम :
छालाअनुसार अनुहारमा केही समस्या देखिएमा सोहीअनुसारको क्रिम प्रयोग गरेमा छालाको समस्यालाई सहज बनाउँछ ।
Topics #कसरी जोगाउने जाडोमा छालाको सौन्दर्य ? #छालासम्बन्धी सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री #जाडोमा छालाको सौन्दर्य ?
Don't Miss it जाडोमा फुटेको हातलाई चाँडै सुन्दर बनाउँने केहि टिप्स
Up Next जाडाेमा ल्वाङ चिया पिउनुका फाइदा, जानिराखौं
धेरै पसिना आउँदा के गर्ने ?
पसिना के हो ? छालाको भित्रिसतहमा अवस्थित श्वेदग्रन्थि (Sweat Glands)बाट पसिना बन्दछ । यो ग्रन्थिको काम भने शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा…
मुटुरोग लाग्नबाट जोगिन चिकित्सकका अनुसार कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्दछन्
१. मोटो शरीर भए तौल घटाउने । २. पिर चिन्ता नलिने, कसैसंग नरिसाउने , उत्तेजनामा नआउने, नझर्किने । ३. उच्च…
यस्ता छन्, वाक्सिङ गर्दाका फाइदा र ध्यान दिनुपर्ने कुरा
वाक्सिङको साइडइफेक्ट धेरै कम हुन्छ । अनावश्यक रौँ हटाउँदा शरीरमा पसिना जमेर दुर्गन्ध निस्कन पाउँदैन । शरीरका अनावश्यक रौँ हटाएर…
पुदिनाको दिनहुँ सेवनले मिल्ने छ यस्ता अचुक फाईदा – पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली भान्सामा खासगरी अचारको रुपमा प्रयोग गरिने पुदीना लोकप्रिय जडिबुटी हो । यसले खाना पचाउन सहयोग गर्नुका साथै तौल घटाउने,…
आफ्नाे शरीरको बनावट अनुसार कस्तो खानपान ठिक ? जान्नुहाेस्
चाहे अग्ला होस् वा पुड्को । चाहे मोटो हुन् वा दुब्लो । शरीरका विविधतालाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । यी प्राकृतिक हुन्…
जाडोमा रोटाबाट बालबालिकालाई यसरी बचाउनुस
गर्मी महिनामा पनि रोटा भाइरसका कारण हुने झाडापखाला देखिन्छ, तर यो अत्यन्तै न्यून हुन्छ । अहिले गर्मी पनि गइसकेको र…